Nezvedu - Beijing The Drill Store Machinery Equipment Co., Ltd.
Beijing Iyo Drill Chitoro Machinery Equipment Co., Ltd. (TDS) inotungamira inogadzira mumunda wekuchera uye ekugadzira michina yekugadzira. Isu tinopa akasiyana siyana ma drill rig, emhepo compressors, ekuvaka michina, ekuboora maturusi uye ekupa mazano services,kuti ikubatsire kugadzirisa dambudziko rekuboora pakunyatsoshanda uye nemutengo wakaderera. TDS yakawana mukurumbira wedu unocherechedzwa uye simba rebhizinesi kuburikidza nekusimbisa kwedu mukupa kuenderera mberi kwekudyara mukutsvaga kutsva uye tekinoroji kusimudzira chigadzirwa mhando uye kusangana neInternational Standards of Excellence.
Yedu Services: Main Zvigadzirwa:
Mvura Yakanaka & Geothermal Mvura Well Drilling Rig
Kuchera & Kuchera DTH Kuchera Rig
Kuvaka Mhepo Compressor
Zvishandiso uye HDD Drilling Zvishandiso
TDS ndeye kuve musika mutungamiri mune inoenderana indasitiri ine hunyanzvi uye vatengi tarisiro. Yedu mukana ndeimwe-yekumira sevhisi.Tinogona kupa zvakakwana kuchera mhinduro dzemapurojekiti ako.
Mainjiniya edu ane anopfuura makore makumi maviri ekuchera ruzivo. Kuburikidza nekuongorora kwakazara uye nzwisiso yakanaka yezvinodiwa nevatengi, tinoita zvese zvatinogona kuvimbisa vatengi nezve yakaderera pamamita mutengo muzvinhu zvese kubva kusarudzo dzemhinduro, dhizaini yezvigadzirwa, kutenga kwezvinhu, uye hunyanzvi hwekugadzira kusvika pakutengeswa kwezvigadzirwa.Chinangwa chedu ndechegumi muzana kugutsikana kwevatengi.
Yedu mitauro yakawanda, muti-mutsika manejimendi timu inokoshesa kutaura kwakanaka, kwakanaka. Isu takakumikidzwawo mukuenderera mberi nekuvandudza kweese maitiro ekugadzira. Panguva imwecheteyo, TDS ine nyanzvi yekutumira timu iyo inogona kupa vatengi nekukurumidza, zvirinani, uye zvakanyanya Kufungisisa zvizere ecological cheni masevhisi. Ndicho chedu chenguva dzose kutsvaga kuti ubatsire iwe chengetedza peni imwe neimwe. Mushure memakore ekuunganidzwa, TDS yakunda kuvimba nekufarirwa kwevashandisi kumba nekune imwe nyika nehunyanzvi hwayo hwehunyanzvi, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mutengo wemakwikwi, sevhisi inofungisisa uye yakakura nzira dzechigadzirwa.
TDS ichave yako yakanyanya kunaka sarudzo. Isu tinotenda chigadzirwa chemhando yepamusoro chinotaura choga. Tinomira nezvose zvatinoita nekutengesa. Tinotenda vese rutsigiro rwevatengi uye tinoshuvira kuwana yako yakadzika kufarira uye uve wako wepamoyo mudiwa.
Mvura Well Drilling Rig Machine, Dhiziri Mhepo Compressor, Dth Nyundo Bit Mutengo, 6 Dth Nyundo, Hydraulic Mvura Tsime Kuchera Rig, Rori Yakakwira Mvura Tsime Kuchera Rig,